Akaburitsa Chirevo pane 'Matanho Ekuvhurwa kweIstanbul' | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulRakatsikisa Chirevo pa 'Matanho Ekuvhurwa kweIstanbul'
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, GENERAL, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
Izvo hazvireve kudzokera kune zvakajairika.
IMM Sayenzi Yekuzivisa Advisory Board yakaparura mushumo we 'Matanho Ekuvhurwa kweIstanbul'. Mumushumo; Turkey ndeyekudzikisa kwehuwandu hwekufa kuwanda; zvisinei, zvakataurwa kuti hapana data hutano maererano neIstanbul. Chirevo chakakurudzira kuti danho rekuenderera padanho rinotevera rekugadziriswa kwechiitwa riitwe mushure meongororo yevhiki mbiri.
Mune iyo Chirevo cheIMM yesainzi Board, maonero anotevera akataurwa nekutaura kukosha kwehutongi hwejekerere nekuzivisa vanhu kazhinji.
Tora Ongororo Mumavhiki maviri
“Imwe nhanho yasvika padanho reCCID-19. Maitiro ekudzoka kuhupenyu hwakafanira anofanirwa kurongwa zvishoma nezvishoma, kwese kwese uye kwenzvimbo uye mukuwirirana nemisimboti yesainzi yehutano hweveruzhinji uye haifanire kupfuurwa pasina kusangana nemamwe mamiriro nekunyatsoongorora danho rega rega rekutendeukira kuchinjika.
Nhamo dzinofanirwa kuve dzakaitika mukugadziriswazve dzinotakura njodzi yekuwedzwazve kwemakesi eCCIDID-19. Neichi chikonzero, nhanho yega yega inotorwa yakakosha kwazvo kuti urege kutambisa nguva uye kushanda nesimba kuti usazodzokera zvakare.
Nhamba yemhosva nyowani dzinoonekwa panguva yekuvhurwa dzinofanira kutariswa nekuchenjerera uye matanho matsva anogona kusarudzwa nekutarisa maitiro ekuvhura. Muchiitiko ichi, kuvhurika, kuri padanho rakakura, kunogona kukanganisa masasi makuru, kunofanirwa kuitwa zvishoma nezvishoma, mushure menguva yevhiki-mbiri yekutarisa, inhanho inotevera inofanirwa kupfuudzwa kuitira kuti unyatsoona mhedzisiro yedanho rega rega. Uye zvakare, shanduko dzinofanirwa kuve nzira mbiri uye kana zvichidikanwa, dzoka nekukurumidza.
Kuvhurwazve kunofanira kutanga nemabasa ane njodzi akanyanya, matunhu akanyanya density nemapoka ezvipengo zvakanyanya. Naizvozvo, kutanga kune vanhu vese vanofanirwa kutanga vashandisa nzvimbo dzeruzhinji nekuteerera mutemo wehurefu hwemuviri (1 Meter Rule), asi kune rumwe rutivi, nzvimbo dzine hukama hwakakwira senge mabara, maresitorendi, zvikoro, nzvimbo dzekutengesa yezvisina kukosha zvigadzirwa zvinofanirwa kusiirwa imwe inotevera nguva.
ISTANBUL INOFANIRA KUTI IVE NECHEMA CHEMA
Istanbul inofanirwa kunge iine chirongwa chakasiyana chekuvhura, zvese seguta rine huwandu hwehuwandu uye dunhu rakanyanya kurwara nedenda. Mune uyu mushumo, unoongorora nzira yekuvhura zvakare yakanangana nepurovhinzi yeIstanbul, ine chinangwa chekufungidzira matanho ezvematunhu pane iwo maitiro ezvesayenzi akakurudzirwa nemasangano anokwanisa uye nyika yesainzi .. Huwandu hwezviitiko muIstanbul ndeye makumi matanhatu muzana muzana yehuwandu hwehuwandu hwemhosva mumwedzi wekutanga (1 Kubvumbi) wekubuda. yakaratidza. Huwandu hwezviitiko nhasi hunofungidzirwa kuti hunopfuura makumi matanhatu muzana.
ISANGANO REMHENYU HWEMPENYU RAKANYANYA
World Health Organisation yakatsanangura zvitanhatu nzira yekutanga kubvisa zvakakura zvakatemerwa zvirango. Nyika dzinofanira kusangana nezvinotevera:
1. Uchapupu hwokuti COVID-19 ndima iri pasi pehutongi,
2. Hwakakwanira hutano hweveruzhinji nehutano hutano masimba ekuongorora, kuparadzaniswa, kuongororwa, kuongororwa kwekutsvaga uye kugariswa,
3. Kuderedza njodzi yekuputika munzvimbo dzakakura nekunzwa kwakakwirira - dzimba dzinochengetwa vakwegura, dzimba dzinochengetwa dzevakarwara nepfungwa.
4. Matanho ekudzivirira anosanganisira kure kure mumuviri, kushambidza maoko, hutsanana nekufema kutarisisa muviri kuri kuitwa munzvimbo dzebasa,
5. Kugadzirisa njodzi dzezviitiko kubva munharaunda dzine ngozi huru yekusvibiswa,
6. Nharaunda ine izwi uye kujekeswa mukushandurwa, kuve chikamu chehurongwa uye kuve nekutora chikamu
TRANSPARENCY KUNYANYA KUZIVIKANIRA KUTI ZVINOKOSHA KUKOSHA.
Kune Istanbul, iyo inonzi inosvika makumi matanhatu muzana muzana ezviitiko chaizvo, zvakakosha kwazvo kuzivisa hurumende yemuno mukutanga kuita basa uye kuwana mafungiro avo. Yakajeka uye yakajeka dhata maererano neWHO inogona kuitika tsananguro yemhosva inofanira kupihwa zuva nezuva kuIstanbul, uye zvakafanana data iyi inofanira kuwanikwa kune mamwe maguta.
Sangano zvakare chinhu chakakosha mumatanho ekuvhura zvakare uye hachifanirwe kukanganikwa kuti ichaumbwa nehunhu hwevanhu vari munharaunda. Izvo zvinofanirwa kuzivikanwa neruzhinji kuti chirongwa chekuvhura hachisi chirongwa umo zvese zvinodzokera kunguva yepamberi yedenda, ndiwo matanho anofanirwa kuiswa mukati mematanho, uye kuti kusava nehanya kunovapo panguva yekuvhura kunozodzosera matanho.
Kana danho racho ratorongwa, rinofanira kugovaniswa nenharaunda uye kutora chikamu munharaunda kunofanirwa kubvumidzwa. Izvo zvikonzero / zvikonzero zvematanho anotorwa anofanirwa kutsanangurwa uye kutarisirwa kutevedzera matanho acho. Kupa chete chaiyo chaiyo zuva pasina kutsanangura chikonzero-chekuita hukama kunoita kuti kutarisira kuwedzere muvanhu. Zvakakosha zvikuru kugamuchira nzanga sechikamu chekuita uye kutora chikamu muchirongwa, kuvhenekerwa zvakakwana pamusoro pematanho ekuchinja.
Muchikamu chechinyakare, rutsigiro munharaunda uye kutevedza mabhizinesi kumitemo kwakakosha kwazvo. Tichifunga kuti inyaya dzipi dzatariswa mukufunga uye ndedzipi zvinhu zviri kuvhurwazve, idzi pfungwa dzinofanirwa kugoverwa neruzhinji pachena. Kana ruzivo rwusiri pachena; kusahadzika, kushushikana, kuita nengozi, kuparadzira ruzivo rwenhema, kuvimba neruzivo zvisiri izvo. Naizvozvo, nzira dzekuvhura uye maitiro acho anofanirwa kuve pachena.
Izvo zvakakosha kuti danho rekureba kwemuviri uye hutsanana matanho panzvimbo dzevashandi panowanikwa kuvhurwa kunoitwa nemapurisa, uye kuti mhosva dzemakambani dzisiri kuita matanho dzinoitwa nevatariri venzvimbo. Maitiro aya anogona kungoshanda pamwe chete nekubatana pamwe nekudyidzana kwevakuru vehurumende zvematunhu nazvino matunhu.
CHITSAUKO CHEMAVO CHISANGANO MUISTANBUL
Turkey yakasarudzwa zvakazara nezveIstanbul yekuwedzera kutsanangurwa kwakawanda kwemamwe data anenge asina data aripo.
Iyo yakaderera iripo data yakaongorora kana maitiro akasangana pamwe nekuongororwa kwakaitwa pakudzikira kubva pakati paKubvumbi, huwandu hwenyaya nyowani muTurkey mukutanga kwaMay, asi izvo zvakamisa kubuda kwevhiki yechipiri yekukura kunoonekwa.
kuderedzwa kwehuwandu hwerufu izvo mamwe maitiro, Turkey inonetsekana asi haina kuwanikwa mune yakajairika data nezveIstanbul. Nekudaro, zvinoenderana nekuongororwa kwakaitwa kubva ku data yeIMM Directorate yeMakuva, huwandu hwevakafa muIstanbul hwakadzikira mumazuva gumi nemana apfuura. Kuwanda kwehurwere pakati pevashandi vehutano vakataurwa mune imwe kigeji hakuzivikanwe.
Sei zvisingaiti 2013 kupinda Chikoro cheHartex 10 Fair!
Brigades Dzvuku dzakabudisa mashoko pamusoro peLyon-Torino high-speed train line
Alstom yakabudiswa desktop desktop nokuda kwenyika
UTİKAD yakabudisa chikafu chinorema mutungamiri
Hook 50 yakabudisa bhuku pamusoro peTattooing, iyo ndiyo yekutanga muTurkey mukuyeuka gore
Releases Performance Based Logistics Chikamu Chekuongorora Kuongorora
Kayseri Transportation yakashuma chiziviso chezvinhu zvakanganwika
Moovit Inoburitsa 2016 Global Public Transport Kutaura Report
Burulaş inobudisa Bursa Yunuseli Airport schedule
TCDD Yakabudiswa Nhamba Kupfuura Mifananidzo
TCDD Transportation Inc. Yakabudiswa nemutemo wekusimudzirwa nekududzirwa kwepahloko
TÜVASAŞ 43 Inoparidzira Vashandi veHurumende Kutenga Zvakazi
UTİKAD yakabudiswa E-Commerce Report
Ministry Inoburitsa Çorlu Chitima Yetsaona Chirevo 416 Mazuva Gare gare
Kupfuura Turkey yakatarwa
Malatya's Environment-Friendly Trambus System Report Yakabudiswa
Shock report on tram muIzmir
Nyorera pamusoro pekufambisa kwezvitima kubva kuMudadtan Çorum
Mitatu mitatu yakasiyana pamusoro pekufa kweEbru Gültekin Ilıcalı
Ministry of Infrastructure yeUkraine Yakagovana Matanho Ekutanga Ezvifambiso neVafambi
Taura pamusoro peImir tram mapurisa